Njengesixhobo sokucoca indlu - isicoci sokucoca, sidlala indima ebaluleke kakhulu, phantse lonke usapho sisixhobo esifunekayo. Isicoci sokucoca kulula kakhulu ukusisebenzisa, kodwa abantu abaninzi abakuthandi ukucoca kunye nokugcina isicoci se-vacuum. Masifunde indlela yokucoca kunye nokugcina isicoci se-Xiaobian. www.chinApp.Com China brand iwebhusayithi
1. Coca iisundries kunye nezinto zokuqokelela uthuli kwibhakethi ngexesha, coca igridi yothuli kunye nebhegi emva komsebenzi ngamnye, jonga ukuba kukho ukugcwala okanye ukuvuza komoya, kwaye ucoce ngokucokisekileyo igridi yothuli kunye nengxowa ngesepha kunye namanzi ashushu, uvuthe zomise. Akuvunyelwe ngokungqongqo ukusebenzisa igridi yothuli eyomileyo kunye nengxowa.
2. Jonga ukuba intambo yombane kunye ne-plug zonakele. Emva kokusetyenziswa, vala i-coil yamandla kwisiqwengana kwaye uyixhome kwigwegwe lekhava yentloko.
3. Emva kokufunxwa kwamanzi, jonga indawo engena umoya ukuze ivaleke okanye inkunkuma, kungenjalo yicoce kwaye ujonge ulwelo oludadayo ngomonakalo.
4. Umatshini kufuneka uphathwe ngononophelo kwaye akufuneki uchatshazelwe ngamandla angaphandle.
5. Xa umatshini ungasebenzi, kufuneka ubekwe kwindawo engena umoya kwaye yomile.
6. Xa ucoca umatshini, nceda usule ngelaphu elimanzi elinamanzi okanye isepha engathathi cala. Akuvunyelwe ngokungqongqo ukuntywiliselwa kwintloko yenjini emanzini ukucoca. Sukusebenzisa isicoci esonakalisayo esifana nepetroli kunye namanzi ebhanana, kungenjalo iqokobhe liya kuqhekeka
7. Musa ukugcina umatshini usebenza ngokuqhubekayo ixesha elide. Nceda ulawule ixesha lokusebenza eliqhubekayo ngaphakathi kweeyure ezi-2, ngaphandle koko iya kuchaphazela ubomi benkonzo kumatshini.
8. Xa isicoci sokucoca ulwelo sisetyenziswa ixesha elide, ukufunxa kuya kuncipha ngenxa yokuvalwa kwemingxunya yesikrini sokucoca ulwelo. Ukuthintela ukwehla kokutsala, isikrini sokuhluza kunye nebhegi yelaphu kufuneka icocwe rhoqo ngamanzi, emva koko yomiswe kwindawo epholileyo ukuze iphinde isetyenziswe ukubuyisela ukutsala.
9. Ukuba injini ephambili ishushu, ikhupha ivumba elitshisayo, okanye ukungcangcazela okungaqhelekanga kunye nesandi, kufuneka ithunyelwe ukulungiswa ngexesha, kunganyanzelwanga ukuba kusetyenziswe.
10. Musa ukusonga umbhobho rhoqo, sukuyolula uze uyijike.
11. Indawo esikuyo isicoci sokucoca akufuneki sibekwe kwindawo efumileyo okanye etshabalalisayo kangangoko kunokwenzeka, kwaye indawo enomoya owomileyo kufuneka ikhethwe ukunqanda ukonakala komzimba
Emva kokungeniswa kweXiaobian, kuya kufuneka siyazi indlela yokucoca isicoci sokucoca.